ကိုရီးယားIdolလေးလိုလှချင်တာလား? ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးလေးလိုဆွဲဆောင်မှုရှိချင်တာလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကိုရီးယားIdolလေးလိုလှချင်တာလား? ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးလေးလိုဆွဲဆောင်မှုရှိချင်တာလား?
ပျိုတို့ရေ၊ ပျိုတို့အနေနဲ့ ကိုယ်က Korean Idol လေးတွေလိုချစ်စရာလေးဖြစ်ချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် Hollywoodကမင်းသမီးတွေလို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံလေးဖြစ်ချင်တာလားဆိုတာကို စဉ်းစားဖူးကြမှာပါနော်။ ဒါကြောင့် CosmeticMyanmarကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုရီးယားဆန်တဲ့ပုံစံမိတ်ကပ်က သဘာဝဆန်တဲ့ပုံစံလေးကိုအသားပေးတာကြောင့် အရောင်ဖျော့တဲ့ foundation shade တွေ BB creamတွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ ပြီးတော့ Korean သူလေးတွေက အသားဖြူတာများကြတော့ foundation အရောင်တွေကို Cold toneလေးတွေသုံးကြတာများပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ Western ဆန်တဲ့မိတ်ကပ်တွေကတော့ ကိုယ့်အသားရောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့ Warm Toneတွေကိုသုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Western modelတွေ မင်းသမီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Contouring နဲ့ Highlightingကို တွင်တွင်သုံးကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ မျက်နှာရှည်ရှည် ပါးရိုးထင်းထင်းပုံစံပျိုချောတွေများတဲ့ Western မှာတော့ Contouringကမရှိမဖြစ်ပါ။ အရှေ့တိုင်းဆန်တဲ့မိတ်ကပ်ကတော့ သဘာဝကိုဦးစားပေးပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုအသားပေးတတ်တာကြောင့် ပန်းရောင် blusherလေးတွေကိုပဲ contouringထက်စာရင် ဦးစားပေးလိမ်းလေ့ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
Western lookမှာတော့ ထင်းနေအောင်ပြင်ထားတဲ့ eye makeup ကမပါမဖြစ်နောက်တစ်ခုပါ။ မျက်ခုံးထင်းထင်းနဲ့ မျက်ခွံအပြင်ဘက်ကို အရောင်ရင့်ရင့်ချယ်ပြီး အရောင်အနုတွေနဲ့ ပြန် blendလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မျက်တောင်တုကိုလည်း ထူထူထဲထဲတပ်လေ့ရှိကြပါသေးတယ်။ Koreanဆန်တဲ့ မိတ်ကပ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့Eye makeupကိုအများကြီးမလိမ်းဘဲ မျက်ခွံကိုအရောင်တစ်ရောင်လောက်နဲ့ပဲ ချယ်သပေးသင့်ပါတယ်။ Eyelinerကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ shapeကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Eye makeupမှာ Westernနဲ့ Easternရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ Western look ကအရောင်ခပ်များများနဲ့ bold lookတွေဖြစ်လေ့ရှိပြီး Eastern lookကတော့ အရောင်ဖျော့နဲ့ soft ဖြစ်တဲ့ lookတွေများပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့နေရာမှာလည်း Western lookအတွက်ဆိုရင် nude ဒါမှမဟုတ် bold colorတွေကိုရွေးချယ်သင့်ပြီး အရှေ့တိုင်းဆန်ဆန်လေးဆိုရင်တော့ အရောင့်ဖျော့ဖျော့ Pink, Peach, Orangeအရောင်တွေကိုဦးစားပေးသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
အခုလောက်ဆို မတူညီတဲ့ lookတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲသိသွားပြီဆိုတော့ ပျိုတို့အနေနဲ့ကိုယ်နဲ့အလိုက်ဆုံးပုံစံလေးနဲ့ လှနိုင်ကြပါစေရှင်။
image source – www.etudehouse.com
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစီရဲ့ ဟောလိဝုဒ်အလှဘုရင်မများ (အပိုင်း ၁)
Tags: articlemakeup tips